Socdaalkii shaqo raadinta | Shaqooyinka - Xannaanada - Safarka Antony Raj Jayamani ee Dubai
Safarka shaqo ee ugaarsiga - Hoos ka eeg qeybta hoose ee qaybta!
Hadda dib ugu noqoshada ujeedada ugu weyn ee booqashadayda, ugaadhsiga shaqada. Laba toddobaad gudahood waxaan ogaaday in xaalada aysan aheyn sida loo ballanqaaday, waa inaan raadiyaa shaqada inta aan ku noolahay. Waxay ahayd arrin naxdin ii ah laakiin xaqiiqda lama diidi karo. Kadib laba todobaad oo kormeer ah, waxaan hubaa in aan wax yar helo, waxaana rabay in aan u sheego nabadgelyadayda sida ugu dhakhsaha badan. Ma aanan dooneynin inay culeys ku saaraan iyaga oo aan waligood iiga dhigin inaan dareemo sidaan oo kale, ma aanan raaxeysan. Waxay ku biireen CV-kooda shabakadooda bulsheed iyo xirfadahooda, waxay diyaariyeen wargeysyo ka yimid meesha aan ku khasbey shaqooyin ku habboon aniga oo isbarbar dhigi kara astaantayda. Waxay ahayd bilowgii.
Socdaalka shaqo ee udubdhexaadku wuxuu u baahday habab isgaadhsiin ah, taas oo ujeeddadaydu tahay in martigaliyeyaashu ii iibsadaan shabakad mobile, aniga oo ah shirkad cusub oo la bilaabay xilligaas ayaa ahaa DU. Sidii aan ku jiray fiiso booqasho, sidaa darteed, way igu adkaan lahayd in aan iibsado tijaabo. Haddii aan doorto shabakada waxaan tagi lahaa Etisalat. Sida Etisalat ayaa ahayd shabakadda kaliya ee la heli karo ka hor, taas oo aasaasay shabakadeeda oo dhan Bariga Dhexe. Laakiin ciidamadeenu waxay doorteen DU aniga waxayna dabooli jireen dhammaan baahidayda aasaasiga ah ee isgaarsiinta. Sidaas awgeed way fiicantahay.
Waqtigaas waxa aan lahaa waayo-aragnimo shaqeynaya ganacsiga safarka oo kaliya, markaa diiradaydu waxay ahayd inaan shaqo ka helo isla goobta. Meelaha la beegsaday ayaa ahaa Abu Dhabi sida aan ku noolaa halkaa. Iyada oo UAE ay tahay dalka ugu booqashada badan iyo dhaqdhaqaaqyada dalxiisayaasha ayaa had iyo goorba ugu sarreeya si aan u hubiyo inaan shaqo helo. Ujeedadaas awgeed, waxaan booqday Malls, Suqs goobo ganacsi oo laga helay xafiiska wakiilada safarka. CV-ga ayaan u qaybiyay buug yar oo qoraal ah. Waxay ahayd arin murugo leh oo aniga iigula mid ah haddii aan codsado xisaab Shaqada ganacsiga safarka ee aan waayo-aragnimo u leeyahay, waxaa la i weydiiyay qiyaasta ku habboon ee aan haysan iyo iibinta halka aqoonta aan loo baahneyn ay tahay arrin laakiin khibrada ayaa la is waydiiyay, taas oo aanan lahayn J. Si kastaba ha ahaatee waxay ahayd jawaab caadi ah oo ku saabsan codsigeyga.
Kadib markii dib loo soo celiyay isku daygii ugu horeeyay ee aan isbeddelay waxaan isbeddelay istiraatiijiyadeyda, waxaanay ballaadhisay raadinteyga raadinta, waxaanay raadinaysay shaqo goobaha aan ka ahayn ganacsiga safarka. Ganacsiga kale ee soo jiidashada ayaa ahaa shirkado isweydaarsi, kuwaas oo ka shaqeeya qaybo kala duwan. Socdaalka, lacagta sarrifka iyo hantida maguurtada ah waxay ahaayeen ganacsigooda rasmiga ah Waxaan isku dayay nasiibkeyga laakiin nasiib daro natiijadu waa isku mid.
Maalin walbana waa la igu wareersan yahay, waxna ma dhicin markii aan rajeynayay. Waxaan maalin walba u isticmaali jiray kafateeriyada internetka si aan u dalbado internetka, iimeylka CV-ga, si aan u eego shaqooyinka banaan. Waxaan tagay xafiiska Danatarka ee Emirates, Abu Dhabi, waxaan rajeynayaa in aan helo jawaabo wanaagsan. Iyada oo kulaylka kuleylka ah ee Abu Dhabi waxaan ku ciyaray jidadka. Waxaan illowday sababta sababtoo ah waxaan ogahay ujeedada, taas oo noqon lahayd qayb ka mid ah bulshadan cajiibka ah.
Waxaan sii ballaariyey raadinteyda raadinta ka timid Abu Dhabi ilaa gobolada Imaaraam waxaan booqday Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaima iyo Dubai Dabcan. Waxaan ka helay, marka laga reebo Abu Dhabi, Dubai iyo fursadaha Sharjah ee helitaanka shaqooyin gobolada kale waa kuwo aad u daacad ah. Sidaas awgeed waxaan diiradda saari jirey 3, Abu Dhabi waxay ahayd mudnaanta. Hadda markaan dib u soo laabto, waxaan ogaaday inaan sameeyay wax aan caadi ahayn marka la barbardhigo hab nololeedkeyga ee Lahore, Pakistan. Anigu aad ayaan u xishoodey, waxayna ahayd naadi inaan ka baxo magaalada. Laakiin Imaaraadka Carabta waxaan uqaaday sida hooyo. Waxaan keligey ka safray hal gobol ilaa shaqo kale raadinta shaqada. Waxay ahayd waayo-aragnimo nolosheyda ah.
Duulimaadyada waddooyinka UA E marnaba lama dareemeynin daal, maadaama dhismayaasha ciriiriga ah iyo dhaqanku ay ixtiraamaan inta socdaalkayga. Waxaan doonayay in aan ku raaxeysto daqiiqad kasta laakiin waxaa laga dareemay cabsida ah in uu kudhuftay dhabarkeyga iyadoo aan dadaalkeyga aan midho dhalin. Wakhti iyo lacag lumid ayaa i dhibay. Waxaan ka tagay nolol nololeed oo Pakistan ah iyada oo aan ka dhigayo riyadayda. Waxaan rabay in aan noqdo qayb ka mid ah bulshada caalami ah oo aan ka barto qiimaha wanaagsan ee dhaqamada kale iyo hirgelinta noloshayda.
Waxbarashadayda waayo-aragnimadayda waxay u muuqatay inaanay waxba ka jirin UAE waan ku niyad jabay waanan quustay. Dhamaan rajadayda oo dhan hortood ayaa i hor istaagay.
Sida la sheegay in nin dabaysha ku qabsado caws, waxaan tagay shirkad sahayda ah oo tixraac ah martigeyga. Qofka loo diray ayaa ahaa maamulaha shirkad, sidoo kale wuxuu ahaa kan Pakistani iyo sidoo kale qaraabada uu u soo guuray UAE ee 1980s. Waxay ka codsadeen magangelyada UAE in ay ka baxsadaan xukunkii General Zia oo ahaa taliyihii millatariga.
Hadda shirkadda, waxay ka shaqeynaysay ganacsiga gawaarida. Waxay siisaa goobaha dhismaha. Waa ganacsi ballaadhan maaddaama dhismayaasha aan waligood joojin UAE ayaan la kulmay qofka aad u daacad ah. Wuxuu ii xil saaray mas'uuliyadda cutubyada xisaabaadka shirkadda. Xafiiskeedu wuxuu ahaa Dubai, mid ka mida munaarad weyn oo aan sare udhicin xitaa haddii aan madaxa u jeediyo 90 si toos ah. Shirkadan mintida waxaa ku yaal qolalka qolalka 4 ee xafiiska. Halkaan ayaan ku kulmay markii ugu horeysay noloshayda Baloch (gobolka Pakistan). Wuxuu ahaa qof cajiib ah. Wuxuu i soo dhaweeyay labada gacmood. Dhammaan fikradaha khaldan ee aan ka maqlay Baloch oo kaliya waa la nadiifiyey. Waxaa laga yaabaa in qofkaas uu ahaa saameyn dhaqameedka UAE iyo sidoo kale. Tani waxa ay ahayd tii aan marayay waddooyinka iyo waddooyinka UAE & mar kale xafiisyo iyo nolol xirfadeed. Wuxuu ahaa sida lataliyahayga. Waxa uu i baray software-yada xisaabaadka ay isticmaalaan shirkadu waxay noqon kartaa Peachtree, ma xasuusto hadda. Waxay ahayd waayo-aragnimo wanaagsan, shaqaale xafiisku wuxuu ahaa badi Pakistani ah Hindiya iyo Phillipinos. Waa inaan sheegaa muwaadiniinta UAE door bidaan Phillipinos sida gabdhaha gurigooda wakhtigaas. Anigu wax fikrad ah kama haysto inay yihiin shaqaale badan oo kalsooni leh ama dhaqaale ah, dhab ahaantii wax fikrad ah ma lahan.
Waxay ahayd waayo-aragnimo maalmeedka 4 ee xafiiskaas. Waxaa la ii soo bandhigay AED 2,500 bishiiba oo ay ka goynayaan AED 200 bishiiba sida kharashka fiisada. Guryaha iyo gaadiidka laga soo bilaabo xafiisyada iyo gadaasha waxaa bixiyay shirkadda. Waan ka xumahay arrintan, maadaama aanan ahayn sida aan filayay. Saacadaha shaqadu waxay ka bilaabmeen 7 ilaa 7 oo la socotay 2 saacado maalin fasax ah oo loo isticmaali jiray xafiiska, sidoo kale ma jirin wax la samaynayo inta lagu jiro bartamaha kulul ee maalinta.
Fiisada waxay soo jeediyeen in aan helo shaabad ka bixidda socdaalka soo galaya aagagga Keesh oo ay ku galaan fiisada shaqada ee sanadka 2, waxaa la sheegay in ay tahay dhaqanka caadiga ah. Guryuhu waxay ahayd aqal fadhiga studio ee Sharjah ay wadaagaan dadka 12, waxaa jiray dhammaan musqulaha 2 oo dhan. Ma jiraan wax qarsoodi ah. Gaadiidka xafiiska ayaa la qorsheeyay in uu ka tago xafiiska 6 si aan u qabsano baabuurka aan u baahan nahay inaan diyaar u nahay ka hor intaan 6 aan ku maareyno oo aan bilowno maalinta 5 am. Marka ugu horeysa ee soo gasho xukunka bilaashka ah waxaa lagu dabaqay isticmaalka musqusha. Dhaqdhaqaaqan xayawaanka ah ayaa igu sii diiqaya aniga iyo sida aan horeyba uga niyad-jabay dalabkii, ayaa iga dhigtay inaan ka fakaro si aan u helo ama ugu laabto Pakistan.
Anigu kuma qanacsanayn xaalada. 6 marka aan ka tagno xafiiskeena waxay qaadanaysaa daqiiqado 45 si aan u gaarno. Waxay ahayd gawaarida kaliya ee aan ku khasbanaanay inaan ka tallaabanno Dubai oo ka soo galo Sharjah. Sababtoo ah saacadaha ugu sareeya ee xafiisku waxay u isticmaaleen inay ku noqdaan bamper si ay maalin walba rusheeyaan. Hadda ma aanan ku qanacsaneyn wax walba oo aan helayo waxay ahayd mid xun. Dhammaan fikradda wanaagsan ee ku saabsan Imaatinka Imaatka ayaa burburay. Waxaa jira marwalba marmarka qaar ah inaan qaadno ka hor intaanu ku guuleysanno. Waxaan u maleynayaa inaanan qaan gaadhin in aan fahmo tan. Hase yeeshee, Khamiistii oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee shaqada toddobaadkan waxaan rabay in aan maalmo fasax ah la qaato ciidamadeyda Abu Dhabi.
Markii aan ku laabtay Abu Dhabi waan la hadlay xaaladdan ciidankeyga iyo qoyskeyga dib ugu soo laabtay Pakistan. Macaamiishu way ogtahay in tani ay dhacdo ay igu soo jeediyeen inaan wakhti u qaato, xaaladuhu way sii fiicnaan doonaan. Sida waayo-aragnimadayda hore ee ku saabsan arinta shaqada, waxaan diiday inay dhagaystaan, qoyskaygii dib ugu soo laabtay Pakistan waxay taageereen go'aankeyga aan ku laabto. Waxaan ku qasbanahay in aan shaqo raadsado markaan soo laabto, waxaan rabay in aan qaado qatartaas sababtoo ah waxaan ogaa in qoyskeygu uu dhabarkeyga dib ugu laabanayo. Farqiga kaliya ee muhimka ah ee muhiimka ah ee nolosha Pakistan iyo Dubai ayaa ahaa qoyskii. Qof ayaa sheegay in haddii aad rabto in aad si dhakhso ah u tagto keligeed, laakiin haddii aad muddo dheer tagto markaa tag. UAE waxay ahayd safarkayga dheer. Anigu si buuxda uma aan diyaarin. Waxaan go'aansaday inaan soo laabto.
Muddo ka dib sannad kadib, waxaan maqlay shirkadda la ii soo bandhigay shaqadana waa la xidhay sidaa darteed go'aanka bixinta dalabku waa mid sax ah. Dhaqaalaha sii kordhaya sida shirkadaha UAE waxay ku shaqeeyaan oo kudhowaan xawaaraha isku midka ah.
Halkan waxaa lagu qasbay in aan sheego darawal taxi ah oo ka yimid magaalada Abu Dhabi, kuwaas oo ku tilmaamay dhirta cagaaran ee waddada inta lagu gudajiro wado, waxaanu si dhakhso ah ugu beeray Ramadaanka gacmaheena. Waxaan ku boorinayaa geesinimada qofka go'aansaday in uu ka tago qoyska oo uu door muhiim ah ka ciyaaray isbeddelka Imaatinka oo hadda ah. Waxaan soo laabtay ka dib markii ay 2 bilood ka soo wareegtay safarkayga. Inkastoo aan ballaariyay taariikhda tikidhada mar labaad, waxaan rajeynayaa in aan helo wax qiimo leh laakiin waxay ahayd mid aan waxtar lahayn. Ka dib markii aan soo noqodo marnaba niyad xumo qof kasta oo i weydiiyay Imaatinka ILAA waxaan marwalba rumaysanahay inay ahayd qaddarkeyga oo aanan noqon qof walba. Qof kasta waa in lagu dhiirigeliyaa inuu qaato fursad uu ku noolaado riyooyinkooda. Waxaan kaliya u sheegay iyaga xagaaga ma ahan xilli ciyaareed wanaagsan oo loogu talagalay ugaadhsiga shaqada. Sidaas u qorshee bilawga Oktoobar ilaa Maarso.
Markii aan soo laabtay Imaatinka Imaatinka waxay ii ahayd mid ixtiraam badan si aan iigu siiyo hadiyad iyo ixtiraam la'aan mar labaad qaab shaqaale ajnabi ah oo si habsami leh iigu soo gudbiyo, inkastoo maalintii ugu dambeysay ee fiisada. Wakhti ayay qaadanayeen si ay u xaqiijiyaan laakiin waxay ii oggolaadeen inaan dalka ka baxo sharaf.
Sanado ka dib 11 waxaan qabaa inay igu fiicnaan lahayd inaan joogo, laakiin ugu fiicneyd inaan ku soo noqdo. Waxaan bilaabay inaan arko nolosha oo leh caddayn badan oo xalineysa. Waxaan sameeyay isbeddel shakhsiyeed iyo xirfadeed oo noloshayda ka dib markaan soo laabto. Anigu waan ogahay inaanan dabooli karin bilaha 2 illaa dhammaadka dhacdooyinka safarka ee agagaarka erayada 5000 laakiin weli waxaan qoray waxaan xusuustay. Waxaan qoray oo dhan si aan u noqdo taariikhda taariikhda. Sannado badan oo soo socota sheekadan la illoobey ayaa mar kale dib loo qori karaa. Waxaan hubaa in sheekadaydu akhriso cashar iyo cashar. Tan waxaa layga xusuustaa xataa markaan mar dambe imaado. Qoraalladaydu waxay ii sameyn kartaa taariikhyahan oo arkay sawir-gacmeedka Imaaradda leh muuqaal kala duwan.
Mahadsanid, UAE markasta waxaa lagu xasuustaa sidii macallin weyn iyo hagaha. Marwalba marwalba ha ahaato mid miro dhaliya oo raba riyada dadka.
Safarka shaqo ee ugaarsiga 2 oo leh Antony Raj Jayamani. Waxa uu ku guuleystay in uu xoogga saaro shaqo raadinta isla markaana uu awood u helay inuu shaqo helo isla goobtaas.